Pen Drive Iweghachite - Naghachi faịlụ site Pen Drive effortlessly
> Resource> Naghachi> Olee otú iji naghachi faịlụ site Pen Drive
Pen mbanye-eme ka anyị na-atụghị anya n'ihe ize ndụ nakwa dị ka na-eweta oké mma. Kama nke na-akpakọba anyị kemfe faịlụ a na kọmputa, Anyị niile na-eji na-echekwa ha na a pen mbanye. Karịsịa ndị na-ejegharị ejegharị ọchụ nta ego, ọ bụ n'ezie ezi a nchebe na adaba n'ụzọ na-data tinyere. Otú ọ dị, pen draịva na-ewetakwara data ọnwụ ruru ụfọdụ amaghị ma ọ bụ mara ihe.
Ihe mere pen mbanye data furu efu:
1. Error: "The Drive F: bụghị e formatted, ị chọrọ usoro ya ugbu a?"
2. Formatting mbanye ma ọ bụ ihichapụ nchekwa na faịlụ site na mberede
3. Ejighị n'aka ruo n'ókè ike ala mgbe ị ikwunye na kọmputa
4. ọ pụghị "Wepu Akụrụngwa" na Windows
5. Virus agha
6. Ọtụtụ mgbe eji
7. Ọzọ amaghị ihe mere
Olee otú ịrụ pen mbanye mgbake
Iji chọta azụ gị furu efu pen mbanye data, i kwesịrị iji pen mbanye data mgbake software. Ọ bụ nnọọ dị mkpa ịhọrọ a nchebe na ọkachamara pen mbanye mgbake ngwá ọrụ, n'ihi na ụfọdụ ala-larịị omume nwere ike wutere gị furu efu data ọzọ. N'ebe a, anyị ji obi umeala nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery maka Windows ọrụ, na Wondershare Data Recovery for Mac (maka Mavericks).
Ha abụọ bụ ndị dị mfe na-eji na-enye kpọmkwem mgbake mode naghachi faịlụ niile ehichapụ, formatted ọ bụ furu efu n'ihi ihe ndị ọzọ iche iche dị ka videos, photos, music, akwụkwọ, ozi ịntanetị, Archive, wdg E wezụga pen draịva dị iche iche na ụdị, Wondershare Data Recovery (n'ihi na Mac) na-akwado mgbake si dị iche iche media nchekwa dị ka mpụga ike mbanye, USB mbanye, igwefoto dijitalụ, ekwentị mkpanaaka, iPod, na ndị ọzọ.
Ugbu a, ka ibudata pen mbanye mgbake software na ịrụ mgbake.
Naanị 3 nzọụkwụ naghachi faịlụ site na pen mbanye
Nzọụkwụ 1. Download na-agba ọsọ nri version nke data mgbake na kọmputa gị na ị ga-esi isi interface dị ka ndị na (na-agbalị Windows version ebe a), mgbe ahụ, itinye gị pen ụgbọala n'ime PC.
Na-aga "Ekem" ma họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi n'aka gị pen mbanye.
Nzọụkwụ 2. Họrọ gị pen mbanye ka iṅomi maka furu efu data (Mpụga mbughari ngwaọrụ).
Nzọụkwụ 3. ịhụchalụ na ego gị chọrọ faịlụ na pịa naghachi.
Mgbe-azọpụta natara data, na-atụle maka nchekwa, biko họrọ ebe ọzọ, dị ka kọmputa ike mbanye ọ bụ ndị ọzọ mpụga ngwaọrụ, ma ọ bụghị pen mbanye ebe ị na-agbake faịlụ ugbu a.
Video nkuzi nke pen mbanye data mgbake
Gịnị mere pen mbanye mgbake-ekwe omume?
Ee! Ị nwere ike naghachi data si pen mbanye mfe. Ka a okwu nke eziokwu, furu efu faịlụ ndị ka ebe gị pen mbanye ma keerughi, n'agbanyeghị na ị na ihichapụ, format ọ bụ furu efu ha ruru ihe ndị ọzọ. Akara dị ka reusable, ohere nke na-nwere site furu efu faịlụ na-agwa usoro na ọ nwere ike ojiji nke ịzọpụta ọhụrụ data. Ya mere, ọ bụrụ na ị dere ọhụrụ data na ya, i nwere ike na-agbake furu efu faịlụ, n'ihi na ha ga-abụ ka e nwere.
Buru n'uche: Ọ bụrụ na ị furu efu oké mkpa faịlụ site na gị pen mbanye, adịghị ịzọpụta ọ bụla ọzọ data gị pen mbanye izere furu efu faịlụ a na-overwritten.
Top 20 iOS 9 ndabere ngwaọrụ maka Windows na Mac OS
iOS 9 na mgbake mode: Olee Ịlụ ya nke Iweghachite ọnọdụ